Umaki: ukumaketha komkhiqizo | Martech Zone
Umaka: ukumaketha komkhiqizo
Kukhona ama-hanger angama-banana ahlukene angama-542 e-Amazon… aqala ngentengo kusuka ku- $ 5.57 kuya ku- $ 384.23. Iziphanyeko zebhanana ezingabizi kakhulu yizingwegwe ezilula ozifaka ngaphansi kwekhabethe lakho. Isiphanyeko sikabhanana esibiza kakhulu yilena enhle kakhulu i-Chabatree banana hanger eyenziwe ngobuciko futhi yenziwe ngemithombo yezinkuni esimeme. Ngokuzimisela… Ngababheka. Ngabala imiphumela, ngayihlela ngenani, ngabe sengenza ithani locwaningo lwe-banana hanger. Cishe manje,
Ukumaketha Komkhiqizo: I-Anatomy ye-Unboxing Experience
NgeSonto, uDisemba 24, i-2017 Douglas Karr
Abanye benu bangahle babheke lokhu, kepha okokuqala ngqa lapho ngabona khona ukufakwa komkhiqizo okumangalisayo kulapho umngani omuhle angithengela i-AppleTV. Kwakuyidivayisi yokuqala ye-Apple engake ngayithola futhi okuhlangenwe nakho okungenzeka ukuthi kwangiholela kwimikhiqizo eminingi ye-Apple enginayo manje. Okunye kokuhlangenwe nakho okumangalisa kakhulu kwe-unboxing kwakuyi-MacBook Pro yami yokuqala. Ibhokisi laliphelele ngokuphelele neMacBook
Ukupakisha Komkhiqizo Kukuthonya Kanjani Okuhlangenwe nakho Kwekhasimende
NgoLwesithathu, Januwari 18, 2017 Douglas Karr
Usuku engathenga ngalo iMacBook Pro yami yokuqala lwalukhethekile. Ngikhumbula ngizwa ukuthi ibhokisi lakhiwe kahle kanjani, ukuthi ikhompyutha ephathekayo iboniswe kahle kanjani, indawo yezesekeli… konke kwenzelwe umuzwa okhetheke kakhulu. Ngiyaqhubeka ngicabanga ukuthi i-Apple inabanye babakhi bezinto ezinhle kakhulu zokupakisha emakethe. Ngaso sonke isikhathi lapho ngikhipha ibhokisi kunoma yimaphi amadivayisi abo, kuyisipiliyoni. Empeleni, kakhulu kangako
Ividiyo: Ingabe Ukumaketha Kwenza Umkhiqizo?
NgoLwesibili, Agasti 23, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lokhu okutholakele okumnandi nokuhlekisayo okuvela kuFrank Dale, oyi-CEO yeCompendium. Empeleni ngazi izinkampani ezimbalwa lapho ukumaketha kudlula khona ulwazi lomsebenzisi nezinsizakalo ezinikezwa ngumkhiqizo. Eqinisweni, empeleni ngicelile imiboniso engazukuvula ngisho uhlelo lwabo lokusebenza, esikhundleni sokusebenzela ipowerpoint ekhanyayo futhi ekhanyayo. Lokho akuyona inkinga uma umkhiqizo wakho ukhangiswa, kepha ngiwubonile uqhekeza ezinye izinkampani lapho ukumaketha kungu